एनआरएनएका खेलाडीले पदक जित्नेछन् : मुकेश बरुवाल (अन्तरवार्ता) - Khelpati
सोमवार, चैत्र ११, २०७५ खेलपाटी संवाददाता
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति अझै तय हुन सकेको छैन । प्रतियोगिताको आयोजनालाई लिएर खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट भिन्नाभिन्नै टिप्पणी आईरहेका छन् । देश पुर्नसंरचनामा गएपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुदमा सात प्रदेशले सहभागिता जनाउँदैछन् ।
अर्को कुरा, आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा विदेशमा रहने नेपालीको संस्था एनआरएनएको टिमबाट समेत खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका नेपाली खेलाडीलाई एनआरएनएले यस संस्करणबाट राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागि गराउँदैछ ।
राष्ट्रिय खेलकुदमा एनआरएनए कसरी गाँसिन आईपुग्यो ? उसको सहभागिताका बिभिन्न पक्षसंग सम्बन्धित रहेर एनआरएनएको खेलकुद विभागका प्रमुख मुकेश कुमार बरुवालसंग खेलपाटीकी संवाददाता गिता राईले कुराकानी गरेकी छिन् ।
नेपाली खेलकुदमा एनआरएनएको सहयोग र सहभागिता कस्तो रहन्छ ?
एनआरएनले सिधै सरकारलाई सहयोग गरेको छैन । तर नेपालबाट विश्वको कुनैपनि ठाउँमा जाने खेलाडीलाई सहयोग गरेको छ । खेलाडीहरु एनआरएनएले सहयोग गर्छ भनेर आशा गर्नुहुन्छ । त्यहि आशलाई मर्न नदिन सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं ।
राष्ट्रिय खेलकुदमा पहिलो सहभागितालाई एनआरएनएले कसरी लिएको छ ?
१५ वर्षको इतिहासमा एनआरएनएले पहिलोपल्ट सहभागिता जनाउँदैछ । राम्रा खेलाडी बाध्यताले बाहिर काम गरेपनि खेलकुदमा लागिरहेका छन् । त्यही खेलाडीले धेरै ठाउँमा नाम सहित पदक समेत जितेका छन् । हाम्रो खेलाडीहरु जुन जुन राष्ट्रबाट आएपनि एनआरएनमार्फत राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जित्नेछन् ।
प्रतियोगिताबाट कस्तो नतिजाको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा धेरै खेल छन् । सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हामीले टिम प्रतियोगिता गर्न पाएनौ । प्रतियोगिताको मिति सरेकाले टिम ल्याउन पाएनौ । एउटा कराँतेको टिम सहभागि गराउन सफल भयौ । आशा छ, खेलाडीले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्नेछन् । राष्ट्रको इज्जत राखेर विदेशमा समेत खेलेर पदक ल्याउँछ भन्ने आश गरेको छु ।
राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागि हुने खेलाडीको खर्च कसले व्यहोर्छ ?
खास त्यसको बारेमा केही निर्णय भएको छैन । खेलाडी सहभागि हुने देशको एनसीसी र बाँकी केन्द्रिय सचिवालयले खर्च गर्ने गरि खेलाडीलाई आउने जाने खर्चको व्यवस्थाको बिषयमा सोचेका छौ । विश्वास छ, हाम्रो सचिवालय र अध्यक्षको टिमका साथै पुर्व अध्यक्ष सबैबाट सहयोग हुनेछ ।
राष्ट्रिय खेलकुदमा एनआरएनएबाट खेल्ने खेलाडीले कति पदक जित्छन् ?
कति पदक जित्छौ भनेर म निश्चित रुपमा भन्न सक्दिन तर हाम्रो खेलाडीले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्छन । खेल सभ्य र भव्य हुन्छ । कुनै पक्षपात हुदैन भन्ने विश्वास छ । हाम्रो खेलाडीले पदक जित्छन् भन्ने विश्वास छ ।
अन्तिममा एनआरएनए र खेलकुदमा तपाईको इतिहास बताईदिनुहोस न ?
म २०४२ सालबाट सितोरियो कराँतेमा प्रवेश गरेको हुँ । २०५० सालको अन्तराष्ट्रिय पदक जितेको हुँ । २०५० सालबाट ५४ सालसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जितेको छु । ५५ सालदेखि ५९ सम्म किक बक्सिङमा नेपाल च्याम्पियन हुँ । २००६ मा मकाउ गएको थिए । १३ वर्षको मकाउ बसाईपछि नेपाल फर्किएको छु । त्यहाँ रहदा समेत धेरै एथ्लेटिक्स, कराँते जस्ता खेलमा सहभागिता जनाउथे । मकाउको कम्पनी भेनेसनमा काम गर्ने गर्छु र त्यहाँको टिम लिडर हुँ ।
खेलकुदको एनआरएनएसँग गाँसिएपछि एसियाको समन्वय गर्दैछु । कसरी धेरै खेलाडीलाई सहभागि गराउने र विदेशमा रहेका खेलाडीलाई एकताबद्व गराएर पदक जिताउन लागेका छौ । विश्वास छ, एनआरएनएबाट खेल्ने साथीले पदक ल्याउनु हुनेछ ।
गलत मान्छेको हालीमुहाली हुन दिन्न – चन्द
राशिदले एडिलेडबाटै बिग बास खेल्ने
राजस्थानद्वारा हैदराबादलाई १५५ रनको लक्ष्य स्थानः समयः